सेल्फी समाजसेवी (लघु कथा) | चितवन पोष्ट दैनिक
सेल्फी समाजसेवी (लघु कथा)
सरकारी राहत वितरणमा जनताको असन्तुष्टिका स्वरहरु सुनिएका थिए । राहत लिन आएका ८–१० जना मान्छेहरु पत्रकारको अगाडि आक्रोश पोख्दै थिए :
‘लौ हेर्नुस्, सरकारले जनतालाई बाँडेको राहत ! चामल कुहिएर पोका परेका छन्, घुन र चिलेसा उत्तिकै छ । यो त पशुलाई खुवाउनेजस्तो छ ! हामी पशु हो ? सरकारले के साह्रो हेपेको हामी जनतालाई । एक पोका नुन तीन घरले बाँडेर लिने रे ! एक किलो दाल दुई घरले भाग लगाउनुपर्ने रे…!’
टोलटोलमा समाजसेवी युवाहरु पनि भोका मान्छेहरुलाई भोकमरीबाट बचाउन बाल्टीका बाल्टी चामल बाँडिरहेका थिए । कयौँ ठाउँमा युवाहरु मिलेर धेरै दिनको लामो यात्रा तय गरेर घर हिँडेका मान्छेहरुलाई खाना पकाएर खुवाउँदै थिए । नजिकै एउटा बोर्डमा लेखिएको थियो– ‘कृपया सेल्फी नखिच्नुहोला ।’
बाटोको ठाउँठाउँमा कसैले पुराना जुत्ताचप्पल, कसैले दालमोठ–चिउरा बाँडिरहेका हुन्थे । जे–जे बाँडे पनि कसैले सेल्फी खिचेका थिएनन् । ती मनकारी मान्छेहरु, अरु कसैले सेल्फी खिच्न लागे भने नखिच्नुस् है भन्थे ।
बाटोमा अनेक खाले समाजसेवीहरु देखिए । घर हिँडेका पैदलयात्रीहरु बाटोमा जसले जे दिन्छन् त्यही खाएर हिँड्दै थिए ।
एक ठाउँमा सुकिलामुकिला मान्छेले हातमा महँगो आइफोन बोकेर बाटोमा चाउचाउ बाँडिरहेको थियो । ऊ भोकले रन्थनिएर हिँडिरहेका मान्छेहरुलाई भनिरहेको थियो– ‘कसलाई भोक लागेको छ आउनुस् है, एउटा पोका लिनुस् र मसँग सेल्फी पनि खिच्नुस् ।’
भोकले शिथिल मान्छेहरु मर्नुभन्दा बहुलाउनु निको ठान्दै चाउचाउ लिन्थे र सेल्फी खिच्न उभिदिन्थे । भोका पेटहरु विवश थिए । सेल्फी खिचेको मन नपराउनेहरु भने तर्किएर हिँड्थे ।
अर्को ठाउँमा घ्याम्पे भुँडी भएको धनाढ्य मान्छे रोडछेउमा ४–५ दर्जन केरा लिएर बसेको थियो । ऊ भोका मान्छेहरुलाई एउटा–एउटा केरा थमाउँदै सामसुङ एस९+ स्मार्टफोनबाट सुन्दर सेल्फीहरु खिच्दै थियो ।
(रनपा–८, पूर्वी चितवन)